Xasan Sheekh “Xafiiska Madaxweynaha dhul ma bixiyo, dhulna lagama bixiyo” - iftineducation.com
Xasan Sheekh “Xafiiska Madaxweynaha dhul ma bixiyo, dhulna lagama bixiyo”
iftineducation.com – Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay eedeymaha dowladdiisa loo jeediyo oo ahaa in dhulal dan guud ah lagu wareejiyay shaqsiyaad iyo hey’ado gaar ah.
Xasan Sheekh ayaa sheegay in Madaxtooyada aanay waxba ka quseyn dhulalka bixintooda, dhul bixinta ay u xil saaran tahay dowladda Hoose sida uu hadalka u dhigay.
“Xafiiska Madaxweynaha dhul ma bixiyo, dhulna lagama bixiyo, dhulka dowladda hoose ayaa u xilsaaran, sharci ayaa dalka lagu ilaaliyaa, shaqsi ma ilaaliyo hal xafiisna ma ilaaliyo, xafiiska madaxweynaha marka ay dhibaato dhacda ama wax soo gaaraan wuu leeyahay, dhul ajnabi la siiyay ma jirto”ayuu yiri Madaxweyne Xasan Sheekh.
Waxaa uu sheegay in ay jiraan Guddiyo heer wasiir ah oo loo saaray in ay soo xaqiijiyaan wararka sheegaya in la bixiyay dhulal danguud ah.
“Waxa la isku heysto waa dad Soomaaliyeed ayaa si sharci iyo sifo sharci ku qaateen, ayagana Guddiyo u sameynay, baaritaan aya agelinayay, qaar dhulalka qaarkiis baaritaan ku socdo, qaladaad hadey dhacaan nidaamka dowliga lagu baarayaa, waana la daba galayaa wixii dhaco”
Ugu dambeyn Madaxweynaha ayaa sheegay in wax kasta ee sharci darro ku baxay, sharciga loo soo celi doonin, cid laga aqbalayana aanay jirin in si sharci darro wax ku qaataan.
In ka badan 15-Musharax oo ku hari doona Wareega hore ee Doorashada (Akhriso Magacyada)